PressReader - Isolezwe: 2018-04-17 - Ushiswe obemsola ngokweba ingidi
Isolezwe - 2018-04-17 - IZINDABA - BONGIWE ZUMA
“Ngivuse umakhelwane ngoba nginenkinga sixabana nomyeni wami. Ngesikhathi efika ngiyomvulela isango simuzwe emfuna ukhiye maqede wangena endlini wabuya esemthela ngento engamanzi. Asizange sinake siqale ukuthuka sesizwa ekhala esemulayithe ngomentshisi. Sizamile ukumcisha savusa nabanye omakhelwane kodwa kwasho ukuthi bese eshe kakhulu. Kodwa ukwazile ukufinyelela kubo. Nathi sicishe salimala ngoba ubengafuni simcishe emva kokumshisa,” kusho uNksz Ngwenya. Umndeni kaDlamini uveze ukuthi awusikhathalele kangako isigwebo samaphoyisa ngoba ngeke isabuya indodana yawo. UNksz Zandile Dlamini ongudadewabo kamufi uthe okubuhlungu kakhulu ezinhliziyweni zabo wukuthi amaphoyisa awazange azwelane nabo ngesikhathi efika endaweni yesigameko.
UKHALA ezimathonsi umphakathi nomndeni kaMnuz Sbonelo Dlamini obulawe ngesihluku wumlisa wasendaweni ngempelasonto